यूट्युब भ्यूजका लागि पनि चलेका कलाकार छानिन्छ : विधान कार्की « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
यूट्युब भ्यूजका लागि पनि चलेका कलाकार छानिन्छ : विधान कार्की
अहिलेका व्यस्त म्यूजिक भिडियो निर्देशक हुन्, विधान कार्की । लकडाउनभन्दा अगाडि उनी निर्देशित भिडियो खासै चलेका थिएनन् । तर, लकडाउनमा उनले जति पनि भिडियोको निर्देशन गरे, सबैलाई दर्शकले रुचाएका छन् । लकडाउनको समयमा उनले एक दर्जन बढी म्यूजिक भिडियोको निर्देशन गरेका छन्, जसमध्ये आठवटा भिडियो अहिले चर्चाको शिखरमा छन् ।
‘नबोली नबोली’ गीतमा आफ्नो निर्देशकिय क्षमताको प्रशंसा भएपछि हौसिएका विधान निर्देशित ‘काले केटा २’ गीतको भिडियो आइतवार सार्वजनिक भएको छ । चलचित्रको शैलीमा निर्माण गरिएको यो गीतको भिडियोमा पनि उनको निर्देशकिय क्षमताको प्रशंसा भएको छ । एकपछि अर्को गीतले पाएको सफलताले आफूलाई जिम्मेवारी थपिएको महशुस भएको उनी बताउँछन् ।
‘मैले झण्डै दश वर्ष यो क्षेत्रमा संघर्ष गरेँ । त्यो बेला काम पाउन नै गाह्रो हुन्थ्यो । काम गर्दै गएपछि कसरी राम्रो काम गर्ने भन्ने हुँदो रहेछ । जब दर्शकहरुले कामको प्रशंसा गर्न थाल्नुहुन्छ तब यात्रा थप चुनौतीपूर्ण महशुस हुँदो रहेछ । अब कस्ता खालका काम गर्ने र कसरी आफ्नो कामलाई निखार्ने भन्ने चुनौती अहिले महशुस गरिरहेको छु,’ विधानले ठूलो पर्दासँगको कुराकानीमा भने ।
अहिले आफ्नो गोल्डेन टाइम चलिरहेको उनी बताउँछन् । आफ्नो दश वर्षको अनुभवले गीतको भिडियो निर्माण गर्न चाहने निर्मातालाई राम्रो सुझाव दिन सक्ने भएको उनको भनाई छ । बजारले मागेको गीत कस्तो हो, कस्ता कलाकार राख्दा त्यसको प्रभाव के पर्छ, कसरी गीतको मार्केटिङ गर्ने, कस्ता गीत चल्छ /चल्दैन भन्ने आँकलन केही हदसम्म गर्न सक्ने भएको उनको अनुभव छ ।
एउटा निर्देशकले भिडियोका लागि चलेको कलाकार खोज्छ वा गीतको अडियो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने- ‘दुईवटै कुराको सन्तुलन हुनुपर्छ । तर, म्यूजिक भिडियोको सवालमा ८० प्रतिशत अंश म अडियोलाई दिन्छु । अडियो राम्रो छ भने दर्शकले वर्षौसम्म गीत सम्झन्छन् । अडियो राम्रो छैन भने भिडियो राम्रो बनेर पनि केही हुँदैन । त्यसैले राम्रो अडियोको गीतको भिडियोमा चिनिएका कलाकार भए सुनमा सुगन्ध हुन्छ ।
उनी यूट्युब भ्यूजका लागि पनि चलेका कलाकार छान्ने गरेको कुरा नकार्न सक्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘कहिँ न कहिँ यूट्युब भ्यूजका लागि चलेका कलाकार छान्ने गरिन्छ । किनकि, यूट्युबमा इनिसियल जुन रिजल्ट आउँछ, त्यसका लागि चलेका कलाकार र यूट्युबमा सबैभन्दा बढी खोजिएका अनुहारलाई हामी लिन खोज्छौं ।’ म्यूजिक भिडियोका लागि कलाकार छनौट गायक/गायिका र निर्देशकबीचको सहमति अनुसार हुने उनी बताउँछन् ।
निर्देशक कार्कीले संगीतकार अर्जुन पोखरेलसँग मिलेर ग्रुपिज्म गरिरहेको आरोप पनि उनीमाथि छ । संगीतकार पोखरेलले संगीत भरेका एकपछि अर्को गीतको भिडियोको निर्देशन विधानले गर्नुले यस प्रकारको चर्चा चलेको हो । तर, उनी यो कुरा ठाडै नकार्छन् । ‘अर्जुनजी राम्रो संगीत भर्नुहुन्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । मैले छान्ने तीन संगीतकारभित्र उहाँ पनि पर्नुहुन्छ । उहाँ र म व्यक्तिगत रुपमा पनि नजिक छौं । त्यसैले ग्रुपिज्म चाहिँ होइन, टिमवर्क चाहिँ हो,’ उनले भने ।
दर्जनौं म्यूजिक भिडियोको निर्देशन गरिसकेका विधान कार्की अब चलचित्र निर्देशनमा समेत होमिँदैछन् । उनी आउँदो वर्षको बैशाखमा चलचित्र निर्माण गर्ने तयारीमा छन् । अहिले चलचित्रको प्रि-प्रोडक्सनको काम भइरहेको उनले बताए । सामाजिक विषयवस्तुमा बन्ने चलचित्रका लागि कलाकार छनौट भने भएका छैनन् । विधानका अनुसार, चलचित्रले बाबु र छोराको भावनात्मक सम्बन्धको कथा भन्नेछ ।
चलचित्रको स्क्रिप्ट लक भइसकेको उनले बताए । म्यूजिक भिडियोबाट दर्शकको आफूप्रति अपेक्षा बढेका कारण चलचित्रलाई पनि उत्कृष्ट बनाउन मेहनत गर्ने उनी बताउँछन् । दश वर्षभन्दा लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा आबद्ध भएका कारण त्यो अनुभवलाई समेटेर चलचित्र निर्देशन गर्न लागेको उनको भनाई छ । उनले म्यूजिक भिडियोमा झैँ चलचित्र निर्देशनमा पनि सफलता पाउलान् त ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
‘डिसेम्बर फल्स’ को अष्ट्रेलिया राइट्स बिक्री
अभिनेता आर्यन सिग्देल र अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरीको मुख्य भूमिका रहने लभस्टोरी चलचित्र ‘डिसेम्बर फल्स’
रहेनन् कलाकार तथा निर्माता रोहिणी भट्टराई
चलचित्र निर्माता, कलाकार तथा स्वास्थ्यकर्मी रोहिणी भट्टराईको ४२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । शुक्रवार
शम्भुसँग रोमान्टिक सुरक्षा (भिडियो)
काठमाडौँ। गायिका रचना रिमाल र प्रविन बेडवालको स्वरमा रहेको नयाँ गीत ‘तिमी कस्की छोरी’को भिडियो
मोडलसँग बिहे गर्दै मूख्यमन्त्री शेरधन राई
यहि माघ ११ गते नेकपाका केहि नेताहरु सहित पारिवारिक सदस्यका बीच प्रदेश नं.१ का मूख्यमन्त्री